HomeTURKEYGobolka Central Anatolia78 KarabukKardemir Oo La Kulmay Kuwa Hawlgab Ah
06 / 12 / 2019 78 Karabuk, Gobolka Central Anatolia, tareenka, SAWIRADA, GUUD, Headline, TURKEY
Kardemir wuxuu la kulmayaa hawlgab
Kardemir Karabuk Iron iyo Iron steel and Trade Inc., waa howlgab howlgab ah, 'Kardemir's Sycamore, Vefa Day' dhacdo ayaa la iskugu keenay sanado kadib maanta. Ururka Kardemir'ın Pensioners Association Karabük Branch waxaa soo qabanqaabiyay munaasabadda 'Vefa Day', shirkadda waxaa lagu qabtay Xarunta Dhaqanka Waxbarashada.
Ku dhawaad ​​shirkadaha howlgab ah ee 350 ayaa ka qeyb qaatay munaasabada oo ka bilaabatay soo bandhigida Kardemir iyo daawashada fiidiyowyada loo yaqaan 'Çınarlardan Sesler', kuwaas oo laga soo uruuriyay wareysiyada ku saabsan xusuusta dadka howlgab ah.
Xilliyada dareenka ee munaasabadda, shaqaalihii hore ee Maareeyaha Guud Dr. Kardemir ayaa ka hadlay. Hüseyin Soykan “Maanta waa maalin aad u macno leh oo gaar u ah Kardemir. Ururka Tani waa geedka ugu horeysay lagu daray bir iyo bir dalka, waxa ay leedahay shaqada Hoosada iyo dhididka ee maanta soo socda, in Turkey ayaa dadaal u ah horumarka iyo kobaca shirkadaha kuwaas oo ah kuwa hirgaliyey horumar degdeg ah warshadaha la yimid ganacsiga muujinaya allabari ee daqiiqado ugu adag, dad dhibaato ku xanuunsaday ah, isku qabtana waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno kuwa howlgab ah. Ku soo dhowow gurigaaga anlat, wuxuu sharxay horumarka shirkadda ka dib gaar-gaar ahaaneed, gaar ahaan maalgashiyadii la dhammeeyey sannadihii dhowaa, kororka awoodda wax-soo-saarka, kala-duwanaanta alaabooyinka iyo nashaadaadka ku saleysan deegaanka iyo bulshada.
Iyada oo maalgashi ka badan Kardemir dollar 2 billion, halka sii kordhaya awoodda wax soo saarka on gacanta ku hal, ayaa dhanka kale Tayyip Madaxweynaha Rexhep In 2007 Erdogan ay xaqiiqsadeen furitaanka qofka Rail Profile Mill la Turkey iyo waddamada gobolka ee u dhexeeya leh in ay noqdaan saaraha tareenka kaliya General Manager SOYKAN, tan sanadka la dhameeyay tareenka Iyadoo ay weheliso Wershadda Teker, Kardemir ayaa waliba ka diiwaan gashan magaceeda mid ka mid ah soosaarayaasha adduunka ugu wax soo saarka badan.
Soykan wuxuu tilmaamay in qeybta ugu sareysa ee shaqaalaha ugu sareeya ee Kardemir iyo shaqaalaha maanta ay aad u badantahay .. Büyük Waxaa laga yaabaa inaad ku dhameysatay waajibaadkaaga hay'addan isla markaana aad uga tagtay adigoo u qalma howlgabnimada ay dowladdeenu siiso. Laakiin waajibaadkaaga hay'addan kama dhamaanayso, mas'uuliyadeena adiga kuma saarna. Howshayadu kaliya maahan inaan soo saarno, laakiin kaliya inaan soo saarno kharash kasta. Himiladeena ugu weyni waa inaan u adeegno farxadda dhammaan daneeyayaasha annaga oo soo saarayna. Si loogu adeego daryeelka bulshada, loona adeego horumarka dalkeenna. Waxaan tan ku sameyneynaa inaan halkaan maanta uga shaqeyno de facto, in kasta oo aad howlgabto oo aad halkan uga baxdid, waxaad sidaas sameyneysaa adigoo dalbaya halkan marwalba. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee hay'ad haynta lagu hayo waa shaki la'aan dadka ka shaqeeya halkaas. Taasi waa sababta aad noogu qiimo badan tahay anaga.
2021 waxaa loo qorsheeyay wax soo saarka 6. Soykan wuxuu caddeeyey in Kardemir uu ka mid noqon doono kuwa ugu horreeya adduunka ee soo saara biraha 3,5 ee leh awooddan Kardemir wuxuu noqonayaa mid ka mid ah soo saareyaasha birta ee adduunka ugu horreeyay ee 100 ka dib sannadihii 1995. Waxaan isku dayeynaa inaan soo saarno birta ku jirta Kardemir warshadaha baabuurta iyo warshadaha difaaca. Sida ay u jiraan Kardemir oo dhisaya buundada wabiga Yufraad, xarkaha TRT ee sannadihii 2002, waxaa jira Kardemir isku dayaya inuu soo saaro birta loogu talagalay difaaca iyo warshadaha gawaarida. Markii uu Kardemir sii kordhayo, tirada shaqaalaha ayaa sii badanaya, shaqaalaha waxay ku noolaan doonaan xaalado ka wanaagsan, tabarucadeenu waxay ku badnaan doonaan magaaladeenna. Waxaan u baahanahay inaan soo saarno alaabo kala duwan, oo aan dib ugu laabanno tan oo ah tan $ 20 dollars, laakiin leh tan oo ah $ 100 dollars, 40 dollars. Waa inaan kor u qaadnaa dakhligeenna ilaa heerka 50 isla tannage. Taasi waa waxa aan u shaqeyneyno. Maaddaama Kardemir sidan ku sii socdo, waad soo shaqeysay, ayeeyadaadii aad ayeey u sii wadi doontaa inay ka sii shaqeyso awoowe ilaa awoowe böyle
Celal Bulut, gudoomiyaha waaxda Karabük ee ururka howlgabnimada, ayaa khudbadiisa ku yiri; Wuxuu u mahadceliyay Hüseyin Soykan wuxuuna yiri, bir waa dareen weyn oo lagu xasuusto howshan oo kale kadib markii aan ka fariistay warshaddan aan ku daadineyno shaqo iyo dhidid. Waxaan rajeynayaa in Turkey ay noqon doontaa tusaale u ah shirkadaha kale ee dhacdadan, "ayuu yiri. Munaasabadda Maalinta Vefa, oo ah tii ugu horreysay ee lagu qabto Kardemir sannadkan, ayaa ku dhammaatay soo bandhigidda taarikhiyo la siinayo kuwa hawl-gabka ah ee hawlgabka ah iyo dalxiis warshad loo habeeyay ka dib markii ay ciladdu ku dhacday shilkii Kardemir Çınarları iyo cunnada.
Kardemir si loo soo saaro baabuurta
(War-Saxaafadeed) Hadafka Sannadka Cusub ee Kardemir oo ah Xarunta Wax-soo-saarka ee Tareenada Tareenka
Kardemir ayaa ku guuleystay Tcdd's 41 Bin 500 Ton Tender Rail
TCDD IKB Tender Rail Tender Tender Kardemir Inc. lagu martiqaaday heshiis
Kardemir inay soo saarto Locomotive iyo Wagon Wheel
Kardemir baabuur iyo muddo dheer shaqo kaabayaasha bilaabay inuu soo saaro biraha
Maamulaha Guud ee Kardemir Demirel: 3 ayaa beegsanaya wax soo saarka malaayiin tan
Kardemir 3 Million Tons Iyadoo La Yeelanayo Nidaamka Soo Saarista
Shirkadda Kardemir ee Kardökmak ee wax soo saarka Locomotive iyo Wagon Wheel…
soo saaraha birta
Farsamooyinka Gawaarida Tareenka
soo saaraha tareenka
rukunka xadiidka tareenka